मिलेमतो प्रस्तावको आशंकामा कप्तानलाई निलम्बन! | Hamro Khelkud
मिलेमतो प्रस्तावको आशंकामा कप्तानलाई निलम्बन!
काठमाडौं (हाम्रा खेलकुद)– सरस्वती युवा क्लबका कप्तान दीपेश श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । खेल मिलेमतोका लागि प्रयास गरेको आशंकामा थप अनुसन्धानका लागि भन्दै कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी अन्तिम ३ खेलमा उनले खेल्न नपाउने भएका छन् ।
गत साता सरस्वती क्लबले यति हिमालयन शेर्पा क्लबलाई ४–३ ले हराएको खेलमा म्याच फिक्सिङ (खेल मिलेमतो) भएको आशंकामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अनुसन्धान थालिसकेको छ । लिगमा इन्टिग्रिटी अफिसर सुदीप आचार्यसहितको टोलीले सरस्वतीका दीपेश र हिमालयन शेर्पाका खेलाडी र अफिसियल गरि ५ जनालाई सोधपुछ गरेको बुझिएको छ ।
छानविनका क्रममा सरस्वतीका कप्तान दीपेशले शेर्पाका गोलकिपर किशोर गिरीलाई मिलेमतोका लागि प्रस्ताव गरेको देखिएपछि त्यसकै आधारमा उनीमाथि निलम्बन भएको श्रोतले बतायो । शेर्पाका गोलकिपर किशोर, आशिष गुरुङ, एक विदेशी खेलाडी, गोलरक्षक प्रशिक्षक मिन बस्नेत र व्यवस्थापक विजेन्द्र पुडासैनीसँग इन्टिग्रिटी अफिसर सहितको टोलीले छानविन गरेको बुझिएको छ ।
छानविनका क्रममा गोलकिपर किशोरले दीपेशले गरेको फोन ह्यान्डस्फ्री गरेर गोलकिपर प्रशिक्षक, व्यवस्थापक अन्य केहि खेलाडीलाई सुनाएको देखिएको बताइएको छ । शेर्पा गोलकिपरले दीपेशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको देखिएकोले उनीहरु माथि अहिले कुनै कारवाही नभएको बताइएको छ । यद्दपी छानविन भने चलिरहेको श्रोतको दाबी छ ।
‘खेल मिलेमतो भएको देखिँदैन । तर जसले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ त्यो मिलेमताको सुरुवात हो’, श्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सरस्वतीका कप्तान दीपेशलाई निलम्बन गरिएको हो ।’
लामो समयदेखि घरेलु लिगमा मिलेमतोका चर्चा हुने गरेपनि यसअघि कहिल्यै कसैलाई बयान लिएको सार्वजनिक भएको छैन । यसपटक भने खेलाडी र अफिसियलहरुमाथि सोधपुछ भएको देखिन्छ । ४० को दशक देखि नै घरेलु लिगमा मिलेमतो हुने गरेको फुटबलकर्मीहरु नै स्वीकार गर्छन् । यद्दपी त्यति बेलाको मिलेमतो व्यक्तिगत, केहि क्लबका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धका आधारमा सहयोग गर्ने तहमा हुने गरेको थियो । त्यति बेला पैसाका लागि मिलेमतो नगरिने बताइन्छ ।
२०६० साल यताबाट भने घरेलु लिगमा पैसाकै लागि मिलेमतो हुन थालेको बताइन्छ । कतिपय अवस्थामा क्लबका बीचमा र कतिपय अवस्थामा खेलाडीहरुका बीचमा खेल मिलेमतो हुने गरेको नेपाली फुटबलका जानकारीहरु बताउँछन् । एन्फाले खेल मिलेमतोलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने भन्दै पटक पटक समिति पनि गठन गरेको उदाहरण छन् । तर, कहिल्यै कुनै कारवाही भएको इतिहास छैन ।
यसपटक भने मिलेमतोको शंकामा छानविन सुरु भएको देखिन्छ । यद्दपी, यसले घरेलु लिगमा कत्तिको प्रभाव पार्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘कहि न कहिबाट सुरु गर्नुपर्छ । यो मिलेमतो रोक्नका लागि पहिलो कदम हो,’ श्रोतले भन्यो , ‘एन्फाले पूर्ण अधिकार दिएर पुलिसको समेत सहयोग लिएर छानविन गर्ने हो भने मिलेमतो रोक्न सकिन्छ । मिलेमतो फुटबल विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिइनुपर्छ । मिलेमतोले फुटबललाई सिध्याउँछ । त्यसैले यसलाई हल्का लिनु हुन्न ।’